Iphupha malunga neHedgehog ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
I-hedgehog lundwendwe olwamkelekileyo kwizitiya ukulawula izinambuzane. Sisilwanyana esinoxolo kwaye sizolile esidliswa ngabantu ngamanye amaxesha, kodwa ngenye indlela asibonakali kwaye sithanda ukuhlala emfihlakalweni. Umkhwa wakhe wokungena engozini ubonakala ngokukodwa. Nje ukuba izisonge, iintsiba zayo ziyayikhusela kwiintshaba zayo.
Ngamanye amaxesha i-hedgehog ikwavela njengomfanekiso ovela ephupheni kwaye ihlala inenqaku elilumkisayo ngephupha elo. Ke nguwuphi umsebenzi oxhomekeke ngokuchanekileyo kwiimeko zephupha.
Kungenzeka ukuba ephupheni awuyibonanga i-hedgehog kwaphela, kodwa isilwanyana esikhangeleka ngokufanayo esifana nesinxibo esine-spiked-esiya kuba yingungu. Kule meko, jonga kwinqaku lethu malunga nenkumba intsingiselo yalo mfanekiso wephupha.
Nabani na onokubona ngokucacileyo i-hedgehog kumava abo ephupha uya kufumana ngezantsi into enokuthethwa sisilwanyana esincancisayo njengezilwanyana zamaphupha:
1 Uphawu lwephupha «hedgehog» - awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
1.1 Into emelwe lusapho lwehedgehog njengophawu lokulala
1.2 Ukondla i-hedgehog ephupheni-umbono omuhle!
1.3 Ay: «caresses the hedgehog» njengophawu lwephupha
1.4 Wow, i-hedgehog engenasiphelo kumava ephupha
1.5 Nge-hedgehog yamaphupha, ubungakanani buya kuthatha isigqibo.
1.5.1 I-hedgehog enkulu kwiphupha elibi
1.5.2 Usana lwehedgehog - iphupha lokonwabela ngononophelo
1.6 I-hedgehog enobundlobongela kwihlabathi lamaphupha-Isilumkiso: prickly and dangerous!
1.6.1 Ukuleqwa yihedgehog. Isilwanyana esiphuphayo sifuna ntoni?
1.6.2 Ufumana uhlaselo lwe-hedgehog ephupheni.
1.7 I-hedgehog ifile, umphuphi uyakhululwa
1.8 Ihedgehog ebhedini. Ukutolikwa kwephupha kuchaza amava okubetha.
2 Uphawu lwephupha «hedgehog» - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «hedgehog» - ukutolikwa kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «hedgehog» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «hedgehog» - awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
Into emelwe lusapho lwehedgehog njengophawu lokulala
Ukuqonda uthungelwano losapho ephupheni kufanekisela umnqweno wokwenene wokhuselo nokhuseleko. Ukuba umntu uphupha yonke intsapho ye-hedgehogs, uxwayisa ngokungakhathali ekuvukeni ubomi. Umphuphi uziva ekhuselekile kunye nabantu abathandayo kwaye uyakonwabela ukusondela kwabo. Oku kuziva ngentuthuzelo kunokuba yingozi. Ingakumbi ukuba lo mntu kuthethwa ngaye ulunge kakhulu. Mhlawumbi yiloo nto exhaphazwa ngoontanga bakhe.
Ukondla i-hedgehog ephupheni-umbono omuhle!
Ukuba unakekela isilwanyana kumava ephupha, oku kubonisa ukuba ulungile kwaye unomphefumlo ococekileyo. Kuba ihedgehog ithathwa njengophawu lokuthozama, iphupha lokondla ihedgehog libhengeza impumelelo yezemali kunye nobungcali kwinyani. Ukuba isilwanyana esanyisayo sithembele kakhulu, umphuphi unokungabikho kunxibelelana nabantu ekuhlaleni el mundo ukuvuka. I-hedgehog eneentloni ilumkisa ngokuzikhukhumeza kubomi bemihla ngemihla.
Ay: «caresses the hedgehog» njengophawu lwephupha
Ukuba uphupha ukuphulula isilwanyana esixhwithekileyo, ngumnxeba wotshintsho. Umphuphi ulumkisa umntu olele ukuba akasadingi sikrweqe sakhe sokukhusela, ngamanye amazwi, ameva akhe. Lixesha lokuba udibane esidlangalaleni nomnye umntu kwaye uphume ngasemva kwengubo yakho yokukhusela. Ukuba umntu ekuthethwa ngaye ubambelele eludongeni lweemvakalelo, woyikiswa ngokuzahlula ngokwenyani.
Wow, i-hedgehog engenasiphelo kumava ephupha
Umntu ochaphazelekayo uziva engenakuzinceda ekuvuseni ubomi ukuba inambuzane ayinazo iintsiba ngexesha lokulala. Umphuphi uyayazi imeko enengxaki, kodwa akanazo izixhobo zokuzikhusela. Ubuze besilwanyana esine-spiky kunokuba ngumqondiso wokuba umntu oleleyo woyika ukukhula ngokukhululekileyo kubomi bakhe bemihla ngemihla. Awufuni ukuba sesichengeni.
Nge-hedgehog yamaphupha, ubungakanani buya kuthatha isigqibo.
I-hedgehog enkulu kwiphupha elibi
Ukuba uguqula uloyiko lwakho kunye namaxhala okwenyani abe sisigebenga ebusuku, kufuneka ukhaliphe xa ujongana nesigebenga samaphupha. Ukuba umntu otya i-bug mhle ngokwenyani ubonakala emkhulu ngokungaqhelekanga kwaye esoyikisa kumava ephupha, oku luphawu lokuba buthathaka komntu ophuphayo. Ukungakwazi ukuzikhusela ekuphathweni ngokungekho sikweni kuye kwaba nzima. Lixesha lokuba uthabathe inyathelo kwaye ukhululeke!
Usana lwehedgehog - iphupha lokonwabela ngononophelo
Iphupha lesilwanyana esisandul 'ukuzalwa libonisa utshintsho kubomi obuvukayo balo mntu kuthethwa ngaye. Ujonge kwisiqalo esitsha sokwenyani apho kuya kufuneka uthathe uxanduva olukhulu. Umntwana omncinci we-hedgehog usebenza njengesilumkiso ephupheni ukuba angayenzi ngokungaboniyo imisebenzi elandelayo. Ubukrelekrele kunye nokubonakalisa amandla akho kuya kukhokelela umntu oleleyo kwinjongo yakhe yokwenyani kwiiprojekthi zakhe.
I-hedgehog enobundlobongela kwihlabathi lamaphupha-Isilumkiso: prickly and dangerous!
Ukuleqwa yihedgehog. Isilwanyana esiphuphayo sifuna ntoni?
Ukunyelisa kunye nokusola okungeyonyani ngelixa uvukile kunokuba sisisulu samava ephupha apho umntu ekuthethwa ngaye eziva engxamile. Ukuba isilwanyana esincancisayo simleqisile umphuphi, lo ngumfuziselo wabantu abanomona abashushu kwizithende zokulala kubomi bokwenyani. Ngoku lixesha lokubonisa iintlobo zakho kwaye uyeke ukugcwala!
Ufumana uhlaselo lwe-hedgehog ephupheni.
Uninzi lwexesha, izilwanyana ezinobundlongondlongo zibonisa ukuba zinengxaki yokuhlala ziphaphile ngelixa zilele. Ngokukodwa ukuba uphupha ukuba izidalwa ezilumkileyo njenge-hedgehog zenza uhlaselo, kuya kufuneka ugcine amehlo akho evulekile ngokwenyani. Ubunzima bokuhlala kunye nokuthintela abo bachaphazelekayo kunye nobunzima kubomi bemihla ngemihla bobungozi! Uhlaselo lweentsiba luphawu lokuba umphuphi ujikelezwe ngabantu abanomona ebomini bokwenyani.
I-hedgehog ifile, umphuphi uyakhululwa
Nabani na ophupha ngokubulala isidalwa esincinci esikhohlakeleyo akanguye umngcungcuthekisi okhohlakeleyo wezilwanyana. Ukufa ye-hedgehog ibonakalisa ukuba umntu ochaphazelekayo ekugqibeleni wakwazi ukuzikhulula kumthwalo ocinezelayo. Ngelixa wayevukile wenza impumelelo kwaye waphumelela ngempumelelo ngokuchasene nomchasi. Uninzi lweemeko ezingalunganga kubomi bokwenyani balowo uleleyo ngokukhawuleza ziyanyibilika zibe luyolo.
Ihedgehog ebhedini. Ukutolikwa kwephupha kuchaza amava okubetha.
Ukuwola isitya sezinambuzane esisongelwe kwibhola kusenokungabi mnandi, kodwa njengophawu lwephupha, ngokuqinisekileyo ngumqondiso olungileyo. Ukufumana izilwanyana ebhedini yephupha kuhlala kubonisa ukuba ubelana ngesondo. Uthando kunye nomdlandla ziqiniswe ngokuqinileyo ekuvukeni komntu ochaphazelekayo. I-hedgehog kumava ephupha, nangona kunjalo, isilumkiso sokuba ungazonwabisi nakwezinye izinto ezikhohlisayo ngaphandle kwawo wonke umnqweno.
Uphawu lwephupha «hedgehog» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukuba i-hedgehog ibonakala xa uphupha xa ulele, ihlala isebenza njenge isilumkiso. Kungabonisa ukuba ukulala akunankathalo kwihlabathi elivukayo. Emva koko akaqapheli nayiphi na ingozi kwaye abanye abantu basebenzise ukulunga kwakhe.
Ngamanye amaxesha i-hedgehog ikwaluphawu lomona kwaye iyalumkisa Ndinomona. Rhoqo iphupha elinobuhlobo kwaye liyinyani kwihlabathi elivukayo ukuze libe lixhoba. Iyaxhatshazwa kwaye ekugqibeleni kufuneka ibonise iintlobo zayo zokuzikhusela. Le ntsingiselo ikwanjalo xa iphupha libona ihedgehog ephupheni lakho libamba imouse.
Ukuba iphupha libulala ihedgehog ngelixa ilele, ke lo mfanekiso wephupha ufuzisela inkululeko yomntu Ukusuka kwiimeko ezingalunganga okanye kwanokoyisa umchasi. Ukuba iphupha lihlaba i-hedgehog, uphando lwangoku lwamaphupha luyitolika njengesilumkiso ngokuchasene nokunyelisa.
Uphawu lwephupha «hedgehog» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwengqondo kwamaphupha, i-hedgehog ifanekisela ukuqonda yokuphupha. Ayibonisi ukuba ndlongondlongo nokuba ndlongondlongo, kuba iyabenzakalisa abo basoyikisayo ngemilomo yayo. Ukuphupha ngokubanzi kuswelekile kule ndawo ikhuselayo. Ke ngoko, isimboli yephupha le-hedgehog ibonakala ngexesha lokulala ukuyisayina kuwe.
Olunye utoliko lwamaphupha lubona i-hedgehog njengophawu lobomi obonelisekileyo kodwa obuthobekileyo. Ikwalumkisa Inzondoenokubusongela obu bomi. Iphupha le-hedgehog linokubonisa ukuba iphupha lijijeke kakhulu kwaye ke kurhoxisiwe. Ke i-hedgehog kwilizwe lamaphupha ingathanda ukukucela ukuba uvule ngakumbi kwaye uthathe inxaxheba ebomini.
Ukuba i-hedgehog iyajikeleza ephupheni, ibonisa ukuba iphupha lingxamisekile kwihlabathi elivukayo. Uxolo kwaye kufuneka uziqhelanise noxinzelelo lwemihla ngemihla.
Uphawu lwephupha «hedgehog» - ukutolika kokomoya
Ngokwenkcazo yamaphupha okomoya, i-hedgehog luphawu lwazo zombini I-Avarice ngokunjalo ne Izinto zokungcamla. Ameva alo nawo afuzisela oko ingqumbo.